Computer (ကွန်ပျူတာ) - မြန်မာနက် လမ်းညွှန်
Myanmar Net Directory
မြန်မာ့ အကြီးဆုံး အင်တာနက်လမ်းညွှန်
There are 6765 listings and 449 categories in our website
Associations (အသင်း) (0/16)
Cyber Security (0/2)
CyberCafe (အင်တာနက်ဆိုင်) (23/521)
Data Center (သတင်းအချက်အလက် ဗဟိုဌာန) (0/7)
Hardware Sales (ရောင်းဝယ်ရေး) (0/35)
Home-Grown Software | ပြည်တွင်းဖြစ် ဆော့ဝဲများ (0/0)
ISP (အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု) (0/14)
Mobile (မိုဘိုင်း ဖုန်းဆိုင်များ) (0/9)
Networking (ကွန်ယက်) (0/8)
Payment-Related (ငွေပေးချေမှု) (0/16)
PyiDaungSu font (ပြည်ထောင်စု ဖွန့်) (0/3)
Report Abuse (အလွဲသုံးမှု တိုင်တန်းရန်) (0/9)
Services (ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း) (0/26)
Software House (ဆော့ဝဲ ထုတ်လုပ်ရေး) (0/20)
System Integration (ပေါင်းစပ် ဝန်ဆောင်မှု) (0/1)
Training (သင်တန်းကျောင်း) (0/11)
Unicode Migration (ယူနီကုဒ် ကူးပြောင်းရေး) (1/14)
Unicode စံသုံး ဝဗ်ဆိုက်များ (0/26)
Web Development (ဝဗ်ဆိုက် တည်ဆောက်ရေး) (0/75)
မြန်မာနိုင်ငံ ဒစ်ဂျစ်တယ် မီဒီယာအသင်း - M... New! Featured
မြန်မာနိုင်ငံ ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာအသင်း (Myanmar Digital Media Association) အား ၉-၁-၂၀၂၁ ရက်တွင် ဖွဲ့စည်းတော့မည် ဖြစ်ပါ၍ အသင်းဝင် ဖြစ်ရန် အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် မီဒီယာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသူများ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
E-Commerce Association Of Myanmar - ECAM New! Featured
(၁) အီလက်ထရောနစ် စီးပွားရေးအသင်းတွင် ပါဝင်သူများအားလုံး အကျိုးစီးပွားကောင်းမွန်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အစိုးရ၊ ပညာသင်ကျောင်းများနှင့်ပူးပေါင်းပြီး မြန်မာပြည်၏ အီလထရောနစ် စီးပွားရေး အသင်းပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းကို မြှင့်တင်ပေးရန်။
(၂) အီလက်ထရောနစ် စီးပွားရေးအသင်းတွင် ဝယ်ယူသူများ ယုံကြည်မှုရရှိနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာ့ ယုံကြည်မှု့ အမှတ်တံဆိပ်ကို အီလက်ထရောနစ် စီးပွားရေးအသင်းလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် စစ်ဆေးအသိအမှတ်ပြုပေးရန်။
(၃) အီလက်ထရောနစ် စီးပွားရေးအသင်းတွင် ဝယ်သူ-ရောင်းသူ မပြေမလည်သည့် ကိစ္စများကို အခြားသော အစိုးရဌာန၊ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ရန်။
MCIA - Myanmar Computer Industry Associa... New! Featured
Building (9) Ground Floor, MICT Park, Hlaing Compus, 11052 Yangon.
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း2
Myanmar Digital Economy Association Inc ... New! Featured
မြန်မာ ဒီဂျစ်တယ် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်အသင်း သည် မြန်မာနိင်ငံ၏ ဒီဂျစ်တယ်၊ အွန်လိုင်းရောင်းချသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ပုံစံသစ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အထင်ကရ အသင်းကြီး ဖြစ်သည်။
Myanmar Digital Economy Association Inc. was registered by licence as an association (company limited by guarantee) under the Myanmar Companies Law 2017 on 15 August 2019.
Myanmar Computer Industry Association, MCIA
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း801
Myanmar Scientific and Technological Com... New!
myanmar digital economy roadmap New!
by Digital Economy Development Committee - DEDC
MoCOM E-Commerce Challenges
Ministry of Commerce: Office No. 3, Nay Pyi Taw.
09 799 631 027
Led by Ministry of Commerce
Supported by UNDP Myanmar
Citicom IT & Mobile Sales & Services
No (186-188), Mahabandoola Garden Street, (Middle Block), Kyauktada Township, Yangon.
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း10
Android Community Yangon
First time bring an Android conference where engineers take the leading role. It's filled with exclusive sessions, the latest and greatest in Android development, and great engineers like you!
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း49
No. 120, Gant Gaw Lane 3, Anesakhan, Mandalay
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း86
Burst Myanmar Co Ltd
Our strategic partners include 1-Net Pte Ltd in Singapore, which will serve as our datacenter management partner, TS Global Networks Sdn Bhd, which will serve as our satellite management partner and Campana Networks Pte Ltd, which will serve as our fiber capacity partner.
Burst Myanmar Co. Ltd.
Thilawa SEZ, Lot A23, Zone A
Thilawa Development Road
Thanlyin Tsp, Yangon, Myanmar
Phone: +9592542 10822
Myint & Associates Telecommunications Lt...
Myint & Associates Telecommunications Ltd. owns and operates the first leading and innovative Uptime Institute Tier III design certified ICT (Information Communications Technology) Data Center in Myanmar.
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း73
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း555
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း334
Facebook Myanmar version
Join this group and use Myanmar version of Facebook now.
ဤအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့် Facebook ကို မြန်မာဘသာသာဖြင့် အသုံးပြုနိင်ပါပြီ။
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း548
about Myanmar language support on Windows
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း557
Telephone+95 1 230 5034
Yangon Region Computer Industry Associat...
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း587
More Myanmar News >>
ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို ယခု လာကြည့်နေသူ စုစုပေါင်း
Myanmar Net Directory >>
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး အင်တာနက် လမ်းညွှန်
မူလ | အင်တာနက် လမ်းညွှန် | စိုက်ပျိုးရေး | အနုပညာ | ကွန်ပျူတာ | လမ်းညွှန် | ပညာရေး | ဖျော်ဖြေရေး | ရေခြားမြေခြား | နိုင်ငံရေး | ကျန်းမာရေး | ဟိုတယ် | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု | ကုန်ထုတ် | စာနယ်ဇင်း | အသင်းအဖွဲ့ | လူမှုရေး | ကုန်ပစ္စည်း မှတ်ချက် | ဘာသာရေး | စားသောက်ဆိုင် | ဝန်ဆောင်မှု | ဈေးဝယ် | ခရီးသွား | အမျိုးအစားမသိ ရောင်းရန်ဒိုမိန်းများ
Back to List of Directory
Associations (အသင်း) (16)
CyberCafe (အင်တာနက်ဆိုင်) (521)
Data Center (သတင်းအချက်အလက် ဗဟိုဌာန) (7)
Hardware Sales (ရောင်းဝယ်ရေး) (35)
Home-Grown Software | ပြည်တွင်းဖြစ် ဆော့ဝဲများ (0)
ISP (အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု) (14)
Mobile (မိုဘိုင်း ဖုန်းဆိုင်များ) (9)
Networking (ကွန်ယက်) (8)
Payment-Related (ငွေပေးချေမှု) (16)
PyiDaungSu font (ပြည်ထောင်စု ဖွန့်) (3)
Report Abuse (အလွဲသုံးမှု တိုင်တန်းရန်) (9)
Services (ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း) (26)
Software House (ဆော့ဝဲ ထုတ်လုပ်ရေး) (20)
System Integration (ပေါင်းစပ် ဝန်ဆောင်မှု) (1)
Training (သင်တန်းကျောင်း) (11)
Unicode Migration (ယူနီကုဒ် ကူးပြောင်းရေး) (14)
Unicode စံသုံး ဝဗ်ဆိုက်များ (26)
Web Development (ဝဗ်ဆိုက် တည်ဆောက်ရေး) (75)
Myanmar Mobile Phone Usage
Do you use MPT mobile ?
Which mobile phone company (or sim card) do you use in Myanmar? MPT (Myanmar Post & Telecoms), Ooredoo, Telenor, or MyTel? Click here to takeaBRIEF SURVEY.
Copyright © 2021. - Consumer Reviews and Ratings.